Volana (fotoana) - Wikipedia
Ny volana dia tsingerim-potoana na halavam-potoana mitovitovy halava amin'ny tsingerim-pihodinan'ny Volana amin'ny Tany. Arakaraka ny tetiandro ampiasaina ny halavan'ny volana ka mety ho 28 ka hatramin'ny mihoatra ny 30 andro izany. Misy herinandro efatra na mahery ny ao anatin'ny iray volana raha misy fito andro ny herinandro iray. Misy 12 volana ny ao anatin'ny taona iray nefa mety hisy volana fanampiny izany arakaraka ny tetiandro ampiasaina ka hahatonga ny taona sasany hisy 13 volana. Manana anarana arakaraka ny tetiandro ampiasaina ny volana tsirairay ao anatin'ny taona.
1 Ny salam-paharetan'ny volana
2.1 Ny volana gregoriana
2.1.1 Anaran'ny volana gregoriana sy faharetany
2.1.2 Ny fiavian'ny anaram-bolana gregoriana
2.2 Ny volana malagasy
Ny salam-paharetan'ny volanaHanova
Tamin'ny voalohany dia ny fifanindrifian'ny tsingerim-pihodinan'ny Volana sy ny an'ny Masoandro no nandrefesana ny volana. Maro karazana ny faharetan'ny volana iray arakaraka ny teboka izay heverina ho sady fiaingana no fiafaran'ny lalan'ny volana.
Ny salam-paharetan'ny volana manaraka andri-bolana, izany hoe ny tsingerim-pisehoan'ny endriky ny Volana, dia misy 29,53058885 andro. Ny endriky ny Volana dia mety ho ny fahatsinanany na ny maha fenomanana azy sns.
Ny salam-paharetan'ny volana manara-kintana, izany hoe ny tsingerim-pisehoan'ny Volana mitaha amin'ny kintana iray, dia misy 27,321661547 andro.
Ny salam-paharetan'ny vola-mikisaka, izany hoe ny tsingerim-pihodinan'ny Volana ampitahaina amin'ny fagitry ny lanitra hatramin'io fangitra io dia misy 27,321582 andro.
Ny salam-paharetan'ny volana manara-masoandro, izany hoe ny fizarana amin'ny isa 12 ny taona manara-masoandro (mikisaka), dia misy 30,43685 andro.
Ny volan-tetiandro dia misy 28 na 29 na 30 na 31 andro.
Ny volana gregorianaHanova
Ny salam-paharetan'ny volana gregoriana dia 30,436 875 andro ao anaty efajato taona fa 30,4375 andro kosa anaty efatra taona.
Anaran'ny volana gregoriana sy faharetanyHanova
Ireto ny anaram-bolana ofisialy amin'ny teny malagasy ao anatin'ny iray taona amin'ny tetiandro be mpampiasa amin'izao: Janoary (31 andro), Febroary (28 na 29 andro), Marsa (31 andro), Avrily (30 andro), Mey (31 andro), Jona (30 andro), Jolay (31 andro), Aogositra (31 andro), Septambra (30 andro), Oktobra (31 andro), Novambra (30 andro), Desambra (31 andro). Ny totalin'ny andro anatin'ireo volana ireo dia 365 na 366 andro.
Ny Febroary dia mety ho soratana hoe Fevrie; ny Marsa mety ho Martsa; ny Mey mety ho May; ny Jona mety ho Jiona.
Ny fiavian'ny anaram-bolana gregorianaHanova
Ny ankamaroan’ny anaram-bolana moderna dia anarana nanomezam-boninahitra ireo andriamanitry ny Romana sy ny emperora na kaisarany fony izy ireo nanompo sampy. Na dia lasa tanàna kristiana aza i Roma dia tsy nanan-kevitra hanova ireo anaram-bolana ireo ny mpitondra fivavahana izay nanam-pahefana tamin-javatra maro tamin'izany fotoana izany. Tsy nanova koa ireo antokom-pivavahana kristiana na hafa niforona taty aoriana, na dia ireo tsy te hanan-javatra ifandraisana amin'izay lazainy ho fanompoan-tsampy aza.
Malagasy Frantsay Anglisy Latina Heviny
Janoary, Zanvie Janvier January Ianuarius Mifandray amin'ny andriamanitra Janosy, andriamanitry ny fiantombohana sy ny fiafarana.
Febroary, Fevrie Février February Februarius Volam-pidiovana, mifandray amin'i Apolo, andriamanitry ny zavakanto, ny hira, ny mozika, ny hatsara endriky ny lehilahy, ny tononkalo ary ny fahazavana.
Marsa, Martsa Mars March Martius Mifandray amin’i Marsa, andriamanitry ny ady.
Avrily, Aprily Avril April Aprilis Volam-pisokafan’ny voninkazo sy ny taona, volan’ny andriamanibavy Afrodita
Mey, May Mai May Maius Mifandray amin’ny andriamanibavy Maia, andriamanitry ny fahalonahana sy ny lohataona
Jona, Jiona Juin June Iunius Mifandray amin’ny andriamanibavy Jonô, mpiaro ny fanambadiana
Jolay Juillet July Iulius Volana anomezam-boninahitra an’i Jolio Kaisara (emperora romana)
Aogositra Août August Augustus Volana anomezam-boninahitra an’i Aogosto (Kaisara)
Septambra Septembre September September Volana "fahafito"
Oktobra Octobre October October Volana "fahavalo"
Novambra Novembre November November Volana "fahasivy"
Desambra Décembre December December Volana "fahafolo"
Ny volana malagasyHanova
Ny volana malagasy mitondra anarana arabo dia misy 29 na 30 andro satria momba ny tetiandro manara-bolana manaraka ny tsingerim-pihodinan'ny Volana izay maharitra 29,530 589 andro (na 29 andro sy 12 ora sy 44 minitra). Ny andro voalohany amin'ny volana tsirairay dia ny andro ahatsinanan'ny Volana ka tsy misy daty raikitra mifanandrify aminy ao amin'ny tetiandro gregoriana izany satria ny salam-paharetan'ny volana gregoriana dia 30,436 875. Misy karazany roa ny anaram-bolana malagasy ka ny iray avy amin'ny fiteny arabo fa ny iray hafa avy amin'ny fiteny sanskrita. Tsy raikitra ny fifanandrifian'ireo volana roa toko ireo noho ny fahasamihafana isam-paritra sy isaky ny mpanandro, nefa misy ny milaza fa toy io aseho amin'ny fafana manaraka io izany fifandraisana izany.
Anaram-bolana avy amin'ny teny arabo Anaram-bolana avy amin'ny teny sanskrita
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Volana_(fotoana)&oldid=999180"
Dernière modification le 20 Desambra 2020, à 09:16
Voaova farany tamin'ny 20 Desambra 2020 amin'ny 09:16 ity pejy ity.